Indlu yamaplanga enamagumbi okulala ayi-1 anebhafu yabucala ephandle. - I-Airbnb
Indlu yamaplanga enamagumbi okulala ayi-1 anebhafu yabucala ephandle.
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguEmma
I-South Downs National Park, kwifama ethe cwaka, le ndlu yamaplanga intle, yenza kube yindawo epholileyo yokuzikhupha kwabantu abathandanayo. Ukubona kakuhle iinduli zaseSouth Down ukusuka kwibhafu yakho yabucala yangaphandle kunye nokubuka iinkwenkwezi ezintle. Zininzi iindawo ezintle zamahlathi ezikufutshane, kunye neelinki eziya eSouth Downs neebhari ezininzi ezintle ezikufutshane.
Iindwendwe ziyakwazi nokubona iibhayisekile eziyi-2 kwi-intanethi ukuze zibuke iindawo ezintle ezisemaphandleni ezijikeleze ifama zize ziye kwisidlo sasemini.
Unokufihlakele kakhulu apha kunye neendawo ezininzi ezivulekileyo kunye nokungcola kokukhanya okungathethekiyo, kwenzelwe ukuba kube mnandi kakhulu ebusika, kugcwale kakuhle kwaye xa isixhobo sokutshisa ngamaplanga sihamba uza kuba mnandi kakhulu. Unokonwabela umlilo omhle phandle ngaphandle nje kwendlu yamaplanga uze wonwabele indawo epholileyo.
indlu yamaplanga ifenitshala ibhedi etofotofo enezinto zayo zokondlula ibhedi, kunye nesofa ekwayibhedi ukuba kuyimfuneko ibe nezinto zokondlula ibhedi neetawuli ziyafumaneka. Inendawo yokuxhoma iinkuni nenamaplanga ayo omlilo nezinye iindawo zokuhlala phandle ukuze ubuke indawo ngeglasi yakho yewayini. Kukho igumbi lakho lokuhlambela labucala elinebhafu ephandle neshawa, ujoyine indlu yangasese enomgquba.
Indawo yangasese inophahla phezu kwayo kodwa ibhafu yindawo yokuhlamba phandle, ngoko iyafana nebhafu enamanzi ashushu ngoko ke yenzelwe iindwendwe ukuba zonwabele ibhafu okanye ishawa ephandle enamanzi ashushu phantsi kweenkwenkwezi zize zonwabele indalo ezijikelezileyo. Ikwayilwe ukuba ilungele nakweyiphi na imozulu okanye amaqondo obushushu ukuba nje amanzi mahle kwaye afudumele. Ukuba zange wadibana nayo ngaphambili, yinto entle nyhani ukuyenza, ukuba ukhathazekile ngokuba nobanda xa uphuma, vele uziphathele ezakho iigawuni uze uye kwindlu yamaplanga ngokwayo uze uphumle kwisitovu sokutshisa iinkuni ngaphakathi, esenza indawo ibe shushu kakhulu.
Kukho indawo encinci esisiseko yekhitshi ngaphakathi endlini yamaplanga enesitovu esinye segesi, iketile, imbiza yokupheka, ipani yokufraya, iipleyiti, izitya, iimagi, iiglasi zewayini, izinto zokuhombisa, iti, ikofu, iswekile, ityuwa, ipepile kunye neoyile yokupheka ziyafumaneka. Kukho nesitya somlilo esikhoyo ngaphandle kwendlu yamaplanga ukuze kubekho umlilo okanye kuphekwe ukutya.
(Kukho iingxelo ezimbalwa zomlilo ezikhoyo kunye nokutsha ukuze wenze umlilo omnye okanye emibini kodwa ukuba ufuna enye i-5 kwibhegi yezinto ezenziwe ngamaplanga kunye ne-5 kwibhegi yokutsha).
Kukwakho nombane wokutshaja iifowuni neethabhlethi nefriji encinci.
Indlu yamaplanga inendawo yokupaka yabucala ekufutshane.
Iindwendwe ziyakwazi nokufikelela kwiibhayisikile zombane ezibizwa ngokuba yi-X2 releigh Motus, ezifumaneka kwiibhayisikile ezimbini zabantu abadala ezixhotyiswe ngee-helmets kunye nezitshixo zebhayisekile ezikhuselekileyo. I-Motus yenza kube lula ukuhambahamba ixesha elide nokuhamba kakuhle, nto leyo ethetha ukuba uza kukwazi ukujongana neenduli zaseSouth Downs ngokulula uze ubuke iindawo ezikude ngaphaya kweediliya, imilambo kunye nokuma kwisidlo sasemini.
I-35 ngebhayisekile, ngosuku :)
( Nceda undithumelele umyalezo ukuba ungathanda ukubhukisha usuku ukuze usetyenziswe)
I-South Downs Way ithatha malunga neyure eyi-1 ukuya kuyo kwaye zininzi iindlela ezirawundi ezibuyela kwisayithi.
Ukuze ufumane iindawo ezintle onokuhambahamba kuzo apha nceda udawunlowude i-app yasimahla ebizwa ngokuba yiAlltrails, ekulula ukuyisebenzisa okanye ndineemephu ze- os ezinikezelweyo kwindawo yokuhlala apho unokulandela iindlela zakho zokuhamba ngeenyawo ukusuka efama.
I-25 ngebhayisekile, ngosuku :)
( Nceda undithumelele umyalezo ukuba ungathanda ukubhukisha usuku lokuyisebenzisa)
kakhulu ngooLwezine ukuya ngeeCawa, indawo yethu yokukhempisha ekuthiwa ngumlilo wamaplanga siza kupheka ukutya okumnandi kwesidlo sakusasa nokutya kwasebusuku. Isoloko iphezu komlilo weenkuni okanye amalahle, enoba kwi-grill okanye embizeni. Isidlo sakusasa sidla ngokuba yiti okanye ikofu ene-bacon/i-egg sandwich okanye i-avocado bagels. Isidlo sangokuhlwa sidla ngokuba yinyama eyosiweyo okanye intlanzi neesaladi okanye izityu ezimnandi ezine-gremolata nezitya ezenziwe ekhaya – sisoloko sikunika ukutya kwabantu abangayityiyo inyama. Inyama yethu ayibhatalelwa; isaladi yethu nemifuno yethu emininzi ivela kwigadi yasekhitshini ekufutshane naphi na apho kunokwenzeka, sifumana izinto zethu zasekuhlaleni. Izicwangciso zehlobo lika-2020 ziquka iintsuku zangaphandle zomthendeleko kunye nabapheki beendwendwe, kunye nezifundo zosuku neeveki eziphakathi ekuphekeni umlilo, ekutyeni nasekutyeni – hlala ujonge iwebhusayithi yethu nakumajelo onxibelelwano ukuze ufumane okungakumbi.
(Ndazise ukuba unomdla wokutya apha , njengoko ndiza kukuthumelela imenyu kwiveki engaphambi kwe-. Imiyalelo kufuneka ibekwe kwiintsuku eziyi-5 ngaphambi kokufika)
(Indawo yokukhempisha yomlilo weenkuni ivaliwe ukususela ngo-Oktobha ukuya kutsho ekupheleni kukaMatshi )
Kukho iindawo eziphakamileyo zasekuhlaleni kunye nePetworth Park ukuze ukonwabele ukuhambahamba. UMlambo iRother kunye neArun zikufutshane, ezibaleka kwiArundel enecawa entle kunye nenqaba epholileyo. Kukwakho neDulborough Brooks Nature Reserve ekumgama wemizuzu eyi-20 ukuya kweyi-30 xa uhamba ngemoto.
Idolophana entle yaseGraffham ikumgama wemizuzu eyi-5 xa uhamba ngemoto okanye imizuzu eyi-30 xa uhamba ngeenyawo kunye nevenkile esedolophini enento yonke.
I-Petworth, i-Midhurst, i-Chichester kunye ne-Arundel zombini iidolophu zembali zasekuhlaleni, zikufutshane. Le ndawo isikelelwe ngeendlela ezininzi zikawonke-wonke kwaye zininzi iindlela zokuhamba ezifihlakeleyo onokuya kuzo ngoko nangoko xa usuka emnyango.
Ukufikelela kakuhle kwi-South Downs xa ukhwele ibhayisekile okanye uhamba ngeenyawo. Ukuze ufumane iindawo ezintle onokuhambahamba kuzo apha nceda udawunlowude i-app yasimahla ebizwa ngokuba yiAlltrails, ekulula ukuyisebenzisa okanye ndineemephu ze- os ezinikezelweyo kwindawo yokuhlala apho unokulandela iindlela zakho zokuhamba ngeenyawo ukusuka efama.
Indawo ikufutshane nemizuzu eyi-30 ukusuka elunxwemeni eClimping nemizuzu eyi-40 ukuya kweyi-50 ukusuka eWitterings.
Ukuhamba ngephenyane ngasemlanjeni iArun okanye ukuhamba ngephenyane elwandle kufutshane neChichester.
Indawo yasekuhlaleni idume ngeli xesha lonyaka lepolo kwiinyanga zehlobo, kunye neGoodwood estate, kunye neziganeko zabo eziqhelekileyo.
Ivenkile yeGraffham Village inendawo yokutyela enee-croissants ezintsha, isonka nekofu kwaye ikufutshane. I-Gartens eseMidhurst inikezela ngesidlo sakusasa esisemagqabini kunye neevenkile zekofu ezahlukahlukeneyo emhlabeni wonke. ICocoa Lounge ePetworth inikezela ngeetshokolethi ezimuncis 'iintupha kunye neti nekofu.
Kukho iibhari ezininzi zasekuhlaleni kule ndawo (sibuze izinto ozithandayo), iiCricketers, iiMoles eziyi-3 kunye neefolokhwe ezihamba isiqingatha seyure kunye ne-Unicorn endala eHeyshott (uhambo lweyure eyi-1 okanye imizuzu eyi-15 ngemoto), enobuhlobo kwaye iyafikeleleka.
Isixeko saseBrighton esidume ngokuzonwabisa, umculo, imidlalo yeqonga, neendawo ezintle zokutya!
Ikude ngemizuzu eyi-45
Ukuba kukho iGalari Yendlu YePallent eChichester kunye nevenkile yokutyela entle okanye iGalari Yendlu YasePetworth.
yeemuvi eChichester "I-Chichester Cinema eseNew Park eyasekwa ngo-1979, inikezelwe ekuboniseni iifilimu eziphambili zaseUK nakwamanye amazwe. I-Chichester Film Festival yonyaka, le cinema inemisebenzi esandul 'ukuvuselelwa eyenza iindwendwe ziphumle zize zonwabele ifilimu yazo kwenye yezona ndawo zikhethekileyo zeemuvi zaseUK "
Ukukhwela ngaphakathi kwisiqithi
saseCraggy eGuildford "I-Craggy Island yeyona nkampani iphambili yokunyuka intaba ngaphakathi eSurrey, enembali yeminyaka elishumi elinesihlanu kunye namashumi amawaka abakhweli abonwabileyo abeza konwabela lo mdlalo uvuyisayo"
Ndifumaneka ngefowuni okanye ngetekisi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Graffham